Liverpool oo Benitiz Eriday - BBC News Somali
Liverpool oo Benitiz Eriday
Said Ali Musa BBC Sport
Naadiga Kubada Cagta ee Liverpool ayaa ku dhawaaqay in tababarihii kooxda,Rafael Benitiz, uu kooxda ka tegayo oo sidaas labada dhinac isku afgarteen.
Mr Benitiz ayaa mudo mudo lix sanadood ah kooxda maamulayey, hase yeeshee, wuxuu ku guuldaraystay in guulo kooxda u soo hooyo sanadii la soo dhaafay iyadoo kooxdu u gudbi wayday horyaalka Naadiyada Yurub.
Baaqan ayaa soo baxay ka dib markii wadahadalo dhexmareen Naadiga iyo wakiilka Benitiz, taas oo lagu falanqeeyey laguna heshiiyey lacag mag-dhow ah oo Benitiz la siinayo, oo lagu soo waramay in ay gaadhayso 6 million oo dollar.
Image caption Benitez iyo Torres
Guulaha uu kooxda gaadhsiiyey mudadii uu tababaraha u ahaa ayaa waxa ka mid ah in sanadii ugu horaysay ee kooxda gacanta ku qabtay inay qaadeen koobka horyaalka Naadiyada Yurub (champions League), kaas oo dhabtii si taariikhi ah ku dhamaaday.
Ciyaartaas ayaa lagu xusuustaa sidii ay ku bilaabantay iyo sidii ay ku dhamaatay, waxayna iska hor yimaadeen kooxda AC Milan ee Talyaaniga.
Qaybtii hore ee ciyaartaas ayaa Liverpool sadex gool lagu dhaliyey hase yeeshee, waxa mucjiso ahayd in qaybtii dambe ay Liverpool sadex gool dhalisay oo hadana gool-ku-laad ku qaaday horyaalka yo koobkii, sanadii 2005, iyagoo isla markaa qaaday koobka Super Cup.
Sanadkii ka dambeeyey ayaa Livepool qaaday koobka FA iyo kan Community Sheild, laakiin wuxuu benitiz ku guulaysan waayey in u qaado koobka horyaalka waxayna ugu dhowaayeen kal hore oo ay kaalinta labaad Liverpool gashay.
Hadaba waxaq la is-waydiinayaa yaa Benitiz dhaxlaya, oo kooxda hogaamin doona, iyadoo laga baqayo in ciyaartoyga muhiimka ah ay kooxda ka taaan.
magacyada la hadal hayo ayaa waxa ka mid ah, Roy Hodgson, oo hada ah tababaraha kooxda Fulham, Martin O'Neil, tababaraha kooxda Aston Villa, Guus Hiddink, Frank Rijkaard iyo qaar kaleba.